Hadii Messi Uu Dunida Ugu Fiican, Sababta Aysan Hal Koox Isula Dheeli Karin & Icardi Oo Afka Furtay %
Weerar yahanka Inter Milano iyo qaranka Argentina ee Mauro Emanuel Icardi, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in isaga iyo Lionel Messi ay tahay mid aan macquul ahayn inay hal koox uga wada dheelaan, xili Barcelona si weyn loola xiriirinayo.
Icardi ayaa inkastoo uu horey Barcelona, ugu soo dheelay hadana wuxuu sheegayaa in wixii hada ka dambeeya ay isaga iyo Messi isku arki doonan kaliya Argentina, halkaasoo uu sheegay in riyadiisa ay ahayd inuu Messi ka garab shaqeeyo.
Isagoo wareysi siinayay Wargeys laga leeyahay wadanka Talyaaniga ayaa wuxuu carabka ku dhuftay Icardi in Lionel Messi uu yahay ciyaaryahanka aduunka ugu fiican, islamarkaana taasi aysan cidna shaki gelin kara, sida uu aaminsan yahay.
“Leo Messi, waxaan aaminsanahay inuu yahay ciyaaryahanka aduunka ugu fiican,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Mauro Icardi.
“Sida iska cad, taasi ma jirto cid kale oo hadal ama dood badan ka keeni karta, maxaa yeelay wax qabadkiisa ayaa muujineysa,” ayuu sii daba dhigay.
Mar la su’aalay hadii ay hal koox uga wada dheeli karaan ayuu ku jawaabay: “Riyadu waxay ahayd inaan uwada dheelno xulka qaranka kubada cagta Argentina, laakiin koox ahaan kaliya Inter ayaan uwada dheeli karnaa.
“Laakiin wuxuu isaga la xiriiraa Barcelona, waxaana riyadaas ay ila tahay aniga mid aan macquul ahayn [inay Bluagrana uwada dheelno],” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, kabtanka naadiga wadanka Talyaaniga ka dhisan ee Inter Milano.